Ruwanda oo Soomaaliya ugu deeqday daawo ku kacaysa 1 milyen oo Dollar.(SAWIRRO) | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ruwanda oo Soomaaliya ugu deeqday daawo ku kacaysa 1 milyen oo Dollar.(SAWIRRO)
Ruwanda oo Soomaaliya ugu deeqday daawo ku kacaysa 1 milyen oo Dollar.(SAWIRRO)
Ruwanda(SONNA) Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Mukhtaar Mahad Daa’uud ayaa Safar shaqo ku jooga magaalada Kigali ee Dalka Ruwanda halkaasi oo uu kula kulmay mas’uuliyiin kala duwan.
Mudane Mukhtaar Mahad Daa’uud ayaa la kulmey wasiirka arrimaha dibadda Ruwanda iyo Wasiirka Cafimadaka Dalkaasi Diane Gashumba,iyagoo ka wada hadlay sidii Dowladda Ruwanda ay kaalinteeda uga qaadan lahayad u gar gaaridda dadkii ku dhaawacmay qarixii 14kii bishan ka dhacay Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
Tan iyo markii uu dhacay qarixii bahalnimada ahaa oo boqolaal qof ay ku nafwaayeen ,islamarkaana kuwo kale ay ku dhaawacmeen waxaa sii kordhayay dowladaha u soo gurmanaya Soomaaliya,waxaana bar bar socda gurmad deg deg ah oo shacabka Soomaaliyeed ay dhexdooda isku fidinayaan.
Wadanka Ruwanda ayaa ah wadan taariikh ku leh Afrika marka loo fiiriyo dagaalada sokeye iyo burburkii dalkaasi uu soo marey iyo sida ay haatan shacabkiisa iyo Dowladduba ay gacmaha isku haystaan,taasi oo horseedey in ay horumar dhankasta leh ay ku talaabsadaan.
Soomaaliya oo kamid ah wadamad adagaalada sokeeye iyo burburka soo marey ee Afrika ka tirsan ayaa haatan u muuqataa in ay dhabihi horumarka ay hayso,inkastoo weli dagaal xoogan lagula jiro kooxaha argagixisada oo hortaagan horumarka umadda Soomaaliyeed.
Previous articleMadaxweynaha JFS oo Shir ku Martiqaaday Madaxda Dowlad Goboleedyada